အင်္ဂလိပ်အွန်လိုင်းလေ့လာပါ - အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
သင်တို့သည်ဤအခမဲ့အွန်လိုင်း ESL အရင်းအမြစ်များကိုအတူအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုနှင့်သဒ္ဒါကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်. ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းတွေ့ပြီသောအကောင်းဆုံးအခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများနှင့်အစီအစဉ်များအချို့လည်းပါဝင်သည်.
အဆိုပါအတန်း GED နှင့်နိုင်ငံသားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြပေမယ့်, သင်သည်လည်းသင်၏ဘာသာစကားအတွက်အတန်းကြည့်ရှုနေစဉ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနိုငျသောကွောငျ့သငျသညျအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူကူညီဖို့ရန်အလွန်ကောင်းသောအတန်းများမှာ. ဒါဟာသင်ပိုမြန်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူကူညီပေးသည်.
GlobalEnglish သငျသညျအလုပျမှာအသုံးပွုနိုငျသောသင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူကူညီရန်အွန်လိုင်းသင်တန်းများရှိပါတယ်. Send your name and email to info@therefugeecenter.org to sign up for free classes.
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဘို့အကောင်းဆုံး apps များ
သငျသညျအရေးအသားလေ့ကျင့်လိုပါသလားနှင့်အင်္ဂလိပ်လေ့လာနေ? ကျနော်တို့ကအခမဲ့ GED ဘာသာစကားများဝိဇ္ဇာစမ်းသပ်ပြင်ဆင်မှုအတန်းအစားပူဇော်.
ဒီလူတန်းစားဟာသူတို့ရဲ့ GED များအတွက်လေ့လာနေကြသူကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကူညီပေမဲ့, ဒါကြောင့်လည်းကိုကူညီသင်သည်သင်၏အင်္ဂလိပ်လေ့လာပွီးတိုးတကျနိုငျ. ယခုဘာသာစကားများဝိဇ္ဇာ GED အတန်းအစားကိုသွားပါ.